Saameynta Siyaasada SD iyo Soogalootiga | Somaliska
Xisbiga xag-jirka ah, Sverigedemokraterna oo 100-kii maalmood oo uu baarlamaanka ku jiray aan wali wax saamayn ah ku yeelan siyaasada soogalootiga Sweden. Inkasta oo codbixiyaashii soo doortay xisbiga midigta fog ee Sverigedemokrterna(SD) ay cudkooda ku siiyeen ballan-qaadkii xisbiga ee ahaa in ay joojin doonaan qulqulka soogalootiga iyo in aan bulshada Sweden la islaamiyeeyn hadana ilaa hada wax saamayn ah kuma yeelan siyaasada soo galootiga ee wadankan Sweden, sida lagu daabacay bogga Radio Sweden maalinta sabtida ahayd. Maadaama uusan isbahaysiga xukuumadu aqlabiyada ballaaran baarlamaanka ku dhex lahayn kaligoodna go’aano gaari karin waxaay wada shaqayn la sameeyeen Xisbiga deegaanka (miljöpartiet), oo lagu yaqaan gacan-furnaantiisa magangalyo doonka, si uusan xisbiga xag-jirka ah saamayn ugu yeelan siyaasada muhaajiriinta Sweden. Jimmie Åkesson oo ah hogaamiyaha xisbiga (SD) ayaan ku faraxsanayn wada shaqaynta Miljöpartiet-ku isla dhinactaagay xukuumada wuxuuna sheegay in xisbiga deegaanku xadkiiba ay dhaafeen marka laga hadlayo tixgalinta siyaasada soogalootiga.
Sida lagu daawaday barnaamij ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Sweden, laguna soo beegay dhamaadka 100-kii maalmood ee ay xukuumadda cusubi jirtay, hogaamiyaha xisbigaan siyaasadiisu cunsuriyada ku salaysantahay Jimmie Åkesson iyo dhalinyarada jaalka la ahiba waxay baarlamaanka ka soo jeediyeen hadalo lidi ku ah guud ahaan dadka soogallotiga ah gaar ahaan Soomaalida. Daawadayaal badan oo soomaali ah ayaa ka carooday mudanaayshii xisbigaan baarlamaaka uga dhexhadlay oo dhawr tuusaale oo xumaan ah soomaalida ku soo qaatay.
Xisbigaan waxa uu ood-wadaag layahay xisbi ka jira wadanka Netherlands oo lagu magacaabo Freedom party uuna hogaamiyo siyaasi mayal adag oo la yiraahdo Geert Wilders.
W/D: Siciid Cabdi Cusmaan, Somaliska.com - Uppsala
Xisbiga xag-jirka ah, Sverigedemokraterna oo 100-kii maalmood oo uu baarlamaanka ku jiray aan wali wax saamayn ah ku yeelan siyaasada soogalootiga Sweden. Inkasta oo codbixiyaashii soo doortay xisbiga midigta fog ee Sverigedemokrterna(SD) ay cudkooda ku siiyeen ballan-qaadkii xisbiga ee ahaa in ay joojin doonaan qulqulka soogalootiga iyo in aan bulshada Sweden la islaamiyeeyn hadana ilaa hada wax saamayn ah kuma yeelan siyaasada soo galootiga ee wadankan Sweden, sida lagu daabacay bogga Radio Sweden maalinta sabtida ahayd.
Maadaama uusan isbahaysiga xukuumadu aqlabiyada ballaaran baarlamaanka ku dhex lahayn kaligoodna go’aano gaari karin waxaay wada shaqayn la sameeyeen Xisbiga deegaanka (miljöpartiet), oo lagu yaqaan gacan-furnaantiisa magangalyo doonka, si uusan xisbiga xag-jirka ah saamayn ugu yeelan siyaasada muhaajiriinta Sweden.
Jimmie Åkesson oo ah hogaamiyaha xisbiga (SD) ayaan ku faraxsanayn wada shaqaynta Miljöpartiet-ku isla dhinactaagay xukuumada wuxuuna sheegay in xisbiga deegaanku xadkiiba ay dhaafeen marka laga hadlayo tixgalinta siyaasada soogalootiga.
W/D: Siciid Cabdi Cusmaan, Somaliska.com – Uppsala